သင့်ရဲ့ထုတ်လုပ်မှုလိုင်းဖြေရှင်းချက်များအတွက် SEHO CNC ခုံထောက်ပံ့ရေး - SEHO
SEHO CNC ခုံ / ကျနော်တို့ 30 ကျော်နှစ်ပေါင်းသုံးစက်တွေရောင်းများ၏ဈေးကွက်မှာမတ်တပ်ရပ်ပါပြီ။ အသုံးပြုသောစက်အပြင်, ငါတို့သည်လည်းနေဆဲတံတား Mills ကအမျိုးမျိုးအပေါင်းတို့နှင့်ဖောက်သည်များအတွက်မတူကွဲပြားမှုဖြေရှင်းနည်းများနှင့်အတူကျေနပ်ဖို့ angular Mills ဌာနမှူးအမျိုးမျိုးကိုဆက်ကပ်။
SEHO CNC ခုံ
Home အမျိုးအစား နယူးသတ္တုအလုပ်အဖွဲ့စက်များ SEHO အော်တို Loading CNC ခုံ
SEHO CNC တွင်ခုံ, နယူးနှင့်တပတ်ရစ်ထောက်ပံ့ရေး 33 ကျော်နှစ်များ - SEHO
SEHO INDUSTRY CO., LTD. 1995 ကတည်းကအသစ် SEHO CNC ခုံတစ်ဦးပေးသွင်းသည်နှင့်ထိုင်ဝမ်အခြေစိုက် CNC စက်တွေ, ကြိတ်စက်နှင့်ကြိတ်အကြီးအကဲများ, နှင့်စက်ဆက်စပ်ပစ္စည်းအသုံးပြုခဲ့သည်။
SEHO တစ်ဦးက-6 + CNC ခုံ
တစ်ဦးက-6 + SEHO AUTO သယ်ဆောင်နေပါသည် CNC ခုံ
: bar ကိုလမ်းခွဲနှင့်အတူ 42mm ကျော်ဘားစွမ်းရည် - CNC တွင်ခုံနှင့်အတူ + A-6 နှိုငျးယှဉျ
1. Space ကိုသိမ်းဆည်းခြင်း: အဆိုပါစက်ခန်ဓာကိုယ် bar ကိုလမ်းခွဲနှင့်အတူအခြားအယေဘုယျ CNC ခုံနှိုင်းယှဉ်, တင်ချစနစ်ဖြင့်ပေါင်းစပ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တစ်ဦးက-6 + ထက်ဝက်သာအာကာသယူထားသော။
2. အလုပ်သမားသိမ်းဆည်း: Loading ချစနစ်ပစ္စည်းများ load နှင့်ချော workpieces ရြဖို့လူ့အစားထိုးရန်နိုင်ပါတယ်။ ဒါဟာအလုပ်သမားကုန်ကျစရိတ်ကိုကယ်တင်ကူညီပေးသည်။
3. ပစ္စည်းသိမ်းဆည်းခြင်း: processing သည့်အခါဘားပစ္စည်းများအတွက်ဘားစွန်းဖြုန်းပါလိမ့်မည်။ ဒီအစက်ဒီတော့အပေါငျးတို့သအပိုင်းပိုင်းအပြည့်အဝသုံးနိုင်တယ်, အပိုင်းအစတို့ကအပိုင်းအစ process လုပ်တယ်။
4. Tool ကိုသိမ်းဆည်းခြင်း: ကျွန်ုပ်တို့၏ပစ္စည်းများလုပ်ကွက်များမှာသူတို့ပစ္စည်းများကိုဖြတ်ဖို့ INSERT ဖြတ်တောက်မလိုအပ်ပါဘူး။
5. အမြင့် Productivity: bar ကိုလမ်းခွဲများအတွက်အစာကျွေးမှုနှုန်းခန့်ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ဦးက-6 + အဘို့ 80%, ဒါပေမယ့်ပစ္စည်းပိတ်ပင်တားဆီးမှုဖြစ်ပါသည်, ထိုအစာကျွေးခြင်းနှုန်းကိုကျနော်တို့ကပို 20% ထိရောက်မှု get အဘယျကွောငျ့ရဲ့ 100% ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
မော်ဒယ်: တစ်ဦးက-6 +
မက်စ်။ လွှဲအချင်း: Ø200မီလီမီတာ
ဖွင့်အရှည်: 70 မီလီမီတာ
Chuck အရွယ်အစား:6"
ဗိုင်းလိပ်တံမြန်နှုန်း: 5000 rpm ပါ
Servo ဆုံလည်: 12 ဘူတာ
OD tool ကို: Ø20မီလီမီတာ
ID ကိုငြီးငွေ့စရာကိုင်ဆောင်သူ: Ø25မီလီမီတာ
X ကို / Z ကိုဝင်ရိုး: 180/520 မီလီမီတာ
X ကို / Z ကို Rapid ခရီးသွား: 18/24 မီလီမီတာ
loading စွမ်းရည်:5ကီလို (လူပျိုဘေးထွက်)
loading အရွယ်အစား: Ø50XL60မီလီမီတာ
Loading မှုနှုန်း: 24 မီတာ / မိနစ်
စက်အမြင့်: 2200 မီလီမီတာ
ကြမ်းပြင်အာကာသ: 4300x1800 မီလီမီတာ
စက်အလေးချိန်: 4100 ကီလို
အော်တိုတင် / Colleting device ကို